Siyaabaha ugu Fiican ee Lacag looga Sameeyo Blog -ka 2022 | Eeg Xeeladeena
Bogga ugu weyn Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Sameeyo Blog -ka 2022 | Eeg Khiyaamadayada
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Sameeyo Blog -ka 2022 | Eeg Khiyaamadayada
Blogging -ku waa hal dariiqo oo xiiso leh lacag online. Si joogto ah uga hadlida mawduuc waxay noqon kartaa mid caajis ah, haddana xamaasad leh, waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lacag lagu kasbado.
Dad badan oo wax ku qora, xiisaha ay u qabaan niche ayaa udub dhexaad u ah jiritaanka baloogyadooda. Haddii aad ku dhacdo qaybtaan, maqaalkan sida lacag looga sameeyo baloog wuxuu ku barayaa sida aadan u xiirin xiisahaaga oo keliya laakiin inaad lacag ku baloogto.
Ama sida a dhinaca kale ama sidii shaqo waqti-buuxa ah, waxaad ku kasban kartaa wax ka badan $ 2 milyan iyada oo loo marayo baloog. Ma yaabban tahay sida ay tani suurtogal u tahay?
Hagaag, maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharxayaa siyaabo kala duwan oo aad lacag uga samayn karto balooggaaga. Iyada oo aan loo eegin nacaybkaaga iyo xiisahaaga, waxaad kasban kartaa $ 1, 000 bishii dheeraad ah ama aad noqon kartaa blogger waqti-buuxa ah.
Ma Dhabbaa In Lacag La Sameeyo?
Haa, waa wax macquul ah inaad lacag ka samaysato blogga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xuso in uusan ahayn qorshe degdeg ah oo hodan ah.
Intee in le'eg ayaad ka kasban kartaa baloog waxay kuxirantahay xirfadahaaga, joogtaynta, iyo hababka lacag-samaynta.
Tusaale ahaan, waxaa jira dhowr siyaabood oo lacag looga helo blog laakiin waxa adiga kuu shaqeeya waxay ku xirnaan doontaa waxaad shaqaaleysiiso. Tani waxay sharraxaysaa sababta bloggers -ka cusubi u kasban karaan $ 100 bishii halka khubarada sida Pat Flynn ee Dakhliga Dahsoon ee Dakhliga ah ay kasbadaan $ 2 milyan.
Marka, waa macquul in lacag laga sameeyo baloog. Laakiin, sidaad lacag u samaysan karto lacag -dhigashada waxay kuxirantahay habab samaynta lacagta aad shaqaaleysiiso.
Lacag intee leeg ayaad ka samayn kartaa Blog?
Lacag ka sameynta balooggu wuxuu ka soo baxaa xiriir aad u sarreeya oo leh waqti iyo dadaal. Meelo badan oo wax lagu qoro, balooglayaashu waxay kasban karaan inta u dhaxaysa $ 0.01 -$ 0.10 aragti kasta oo bogga ah guud ahaan bandhigga iyo xayeysiisyada ku xiran.
Marka, oo leh 1000 bog oo bishiiba ah, waxaad kasban kartaa qiyaastii $ 10- $ 100 bishii.
Marka aragtidaada boggaagu ku koraan waqti, dadaal, iyo joogtayn, waxaad kasbataa wax badan bil kasta. 100 oo bog bog ayaa la daawadaa bishii, bloggers waxay kasbadaan ku dhawaad ​​$ 10, 000 bishii.
60% bloggers -ka oo ugu yaraan toddobaad walba si joogto ah u daabaca 3 waxyaabood oo istiraatiiji ah, waxay kasban doonaan tirooyinka hoose dhowr sano gudahood.
Sanadka 1: $ 1,000 - $ 10,000
Sanadka 2: $ 10,000 - $ 30,0000
Sanadka 3: $ 30,000 - $ 50,000
Sanadka 4: $ 50,000 - $ 100,000
Sanadka 5: $ 100,000 - $ 250,000
Sanadka 6: $ 150,000 - $ 350,000
Sanadka 7: $ 200,000 - $ 500,000
Sanadka 8: $ 300,000 - $ 600,000
Sanadka 9: $ 400,000 - $ 800,000
Sanadka 10: $ 500,000 - $ 1,000,000
Sidee Bloggers -ka bilowga ah lacag u kasbadaan?
Inaad ku guuleysato balooggu wuxuu socon karaa ilaa hal sano ama in ka yar lix bilood. Bilowga, lacag ka samaynta balooggaaga waxaa saameyn ku yeelan doona dhowr arrimood - joogteyn, dadaal, iyo go'aan.
Si aad lacag uga hesho balooggaaga bilow ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad sameysato balooggaaga iskiis u martigeliyay. Ka dib, waa inaad ka dhigtaa mid waajib ah inaad daabacdo waxyaabo aad u wanaagsan oo aad u abuurto taraafikada organic websaydhkaaga.
Bilowga ugu yaraan 10 000 oo bog bog, waxaad ku kasban kartaa lacag adiga oo iibiya xayeysiisyada, badeecadahaaga ama adeegyadaada, iyo suuqgeynta ku xiran.
Akhri Sidoo kale
Sida lacag loogu sameeyo sida Airbnb Host.
Sida Lacag Loogu Sameeyo Blogging
Aynu nidhaahno balooggaagu wuxuu hoos u jiifay laba sano. Ama, waxaad kasbataa celcelis ahaan $ 1, 000 bishii bloggaaga waxaadna la yaaban tahay sidaad wax badan u kasban lahayd.
Waa hagaag, u kaxaynta taraafikada dabiiciga ah ee balooggaaga oo aad lacag ku hesho aragti kasta waa hab fiican oo lacag looga sameeyo baloogga. Laakiin, miyay taasi tahay habka kaliya ee lacag samaynta loogu sameeyo baloog?
Dhab ahaantii maya. Kuwa kasbaday wax badan oo ka socda baloog -ga, waxay sameeyaan wax ka badan qorista waxyaabaha ugu sarreeya si ay ugu kaxeeyaan taraafikada websaydhkooda. Hoos waxaa ah siyaabo la xaqiijiyay oo lacag looga sameeyo baloog 2020:
#1. Iibso Meel bannaan
Haddii aadan wali lacag ka dhigin balooggaaga, tani waa hab fiican oo lagu bilaabo. Kuwa bilowga ah intooda badan, istaraatiijiyadani inta badan waa tallaabada ugu horreysa ee ku wajahan lacag -gelinta baloogyadooda.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in iibinta booska xayeysiiska ay si tartiib tartiib ah u noqonayso istiraatiijiyad aan waxtar lahayn waqtiyadan dambe. Maadaama aadan ku koobnayn xulashadan, waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto sanduuqa oo aad la timaaddo fikrado bannaan oo aad lacag ku iibin karto.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay joogitaanka warbaahinta bulshada ee xooggan-tixgeli inaad meel ku iibiso sanduuqaaga soo-baxa, madaxyada warbaahinta bulshada, ama xitaa PS-ga ku yaal warsidahaaga.
#2. Hel Xiriir Xiriir
Blog -ga ayaa sida caadiga ah ku wareegsan ka doodista nooc ama aag mawduuc. Iyo, hal dariiqo oo lacag looga helo baloogga 2022 waa in la iibiyo alaabada laxiriira hoygaaga.
Asal ahaan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato badeecadaha iibinta ugu sarreeya agagaarkaaga, hel xiriir xiriiriye, oo aad kasbato iibsasho kasta oo lagu sameeyo websaydhkaaga. Si aad lacag u hesho suuq -geynta, waxaad u baahan tahay inaad raadsato badeecado leh qiime sare.
Pat Flynn oo sameeya in ka badan $ 2 milyan oo doollar oo ka yimid baloogga ayaa kasbaday kaliya $ 9, 500 iibinta buugga. Isla bishaas wuxuu kasbaday in ka badan $ 53k iibkii xulufada ahaa. Waxaad u baahan tahay 1, 000 - 2,500 booqdayaasha goobta bil kasta si aad u bilowdo suuqgeynta xiriirka.
#3. Sii Adeegyada La -talinta
Haddii si fiican lagugu wargaliyay hoygaaga, waxaad u fidin kartaa adeegyada la -talinta balooglayaasha kale oo aad saacad ku dallacdo.
Waxaad ku bixin kartaa adeegyadan taleefan, emayl, ama Skype. Intaa waxaa dheer, waxaad abuuri kartaa adeegyo hal-qof ah oo aad siin karto ururada iyo kooxaha. Iyada oo ku xidhan hoygaaga, waxaad tixgelin kartaa xirmooyinka DIY, baakadaha talada emaylka ee aan xadidnayn, iwm.
#4. Iibso Koorso Online ah
Iyada oo ku xidhan nuuggaaga, waxaad diyaarin kartaa koorso onlayn ah si aad wax u barato dhagaystayaasha aad u badan.
Waxaad ku marti qaadi kartaa koorso onlayn ah gabi ahaanba balooggaaga adoo adeegsanaya plugins -ka WordPress sida LearnDash.
#5. Lacag hel si aad u qorto faallooyin
Bloggers -ku waxay qoraan fikradahooda ku saabsan mowduucyada la xiriira niche. Markaad noqoto cod lagu xisaabtamo, waxaad lacag ka samayn kartaa baloog ku qoraya faallooyin lacag -bixin ah bartaada.
Si aad ugu qanciso goobta inay bixiso dib -u -eegista goobtaada, waa inaad marka hore kobci dhagaystayaashaada iyo booqdayaasha billaha ah ee tiro la yaab leh.
Meel fiican oo laga raadiyo macaamiisha waa in la booqdo PayPerPost halkaas oo aad si fudud ugu xiriiri karto meheradaha laga yaabo inay danaynayaan.
#6. Iibi Boostada Blogga ee Isboonsariga ah
Haddii aad tahay qof dhammaystiran, oo laga yaabo inuusan jeclayn fikradda xayeysiisyada ku soo qulqulaya balooggaaga, iibinta boostada baloogga ee la kafaala qaaday ayaa ah ikhtiyaar ka fiican.
Waxaad lacag ka samayn kartaa baloog iyada oo loo marayo kafaala -qaadasho. Tani waxay si fudud uga dhigan tahay in shirkaduhu ay lacag ku siiyaan si aad u metesho badeecadooda, u hawlgeliso dhagaystayaashooda, una hormariso alaabta akhristayaasha.
Si aad uga dhaadhiciso macaamiisha aad beegsanayso, waa inaad marka hore isugu keentaa xirmo warbaahineed oo hal bog ah oo leh faahfaahinta goobtaada. Waa inay sheegtaa tirakoobka taraafikadaada, warbaahinta bulshada ee soo socota, tirada dadka dhagaystayaasha ah, iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah ee rafcaan u noqon kara xiisaha akhristahaaga.
#7. Iibso eBoogaaga Bloggaaga
Mid ka mid ah habka lacag-u-samaynta ee ka socda baloogyada ayaa ah iibinta alaabada dhijitaalka ah. Haddii aad leedahay dhagaystayaal aad u fara badan, u beddel gaadiidkaaga lacag caddaan ah oo dheeraad ah.
Si aad lacag badan uga hesho baloog sannadka 2020, ku qor Ebook mawduuc laxiriira hoygaaga ama rafcaanka u ah tirakoobka dhagaystayaashaada.
Naqshadee dabool soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh oo samee PDF ka mid ah ebook -kaaga. Si arrintan loo fududeeyo, waxaad si fudud u shaqaalayn kartaa plugins eCommerce WordPress.
#8. Marti -geliya Webinar Lacag Leh
Webinars -ka martigelinta waa lama huraan haddii aad rabto inaad dhisto dhagaystayaashaada. Inta lagu jiro webinar -gaaga, waa inaad la wadaagtaa khibradaada oo aad kobcisaa ganacsigaaga.
Haddii aad isticmaaleyso WordPress, way fududahay inaad martigeliso webinar lacag leh.
#9. Ku Iibso Alaabta Jirkaaga Bloggaaga
Ku dar bogga dukaanka bartaada si aad u shaqaaleysiiso habkan lacag-sameynta ee blog-ka. Haddii aad iibiso alaab gacan -ku -samays ah ama aad rabto inaad dadka kale xayaysiiso - ku -soo -bandhigidda alaabta muuqaalka ah baloogga dhagaystayaal aad u badan ayaa u beddeli kara iibin badan.
Iibinta sheybaarkaaga blogka waa hab kale oo lacag lagu helo. Asal ahaan, qaabyadu waxay dadka u badbaadiyaan waqti iyo lacag.
#10. Alaabta Dropship
Beddelka suuq -geynta xiriiriyaha ah ayaa ku iibinaya alaabada balooggaaga khatar aad u yar. Doorashadan ayaa ugu fiican haddii aad jeceshahay inaad wax iibiso adiga oo aan la kulmin macaamiishaada ama macaamiishaada.
Marka la soo daadiyo, waxaad lacag ka samaysataa blog. Habkan lacag-samaynta ah ayaa leh awood sare, waana hab fiican oo lagu iibiyo alaabooyinka khatarta yar leh.
Blogging waa mid ka mid ah ganacsiyada faa'iidada badan leh ee ka soo baxay horumarka tignoolajiyada.
Inta badan baloogyada waxeey soo bandhigaan in udub dhexaadka jiritaankooda balooggu yahay xamaasad. In kasta oo xamaasaddu muhiim u tahay baloog -dhigidda, baloog -yaqaannada ayaa runtii samayn kara wax ka badan ka hadalka danahooda.
Markaa, haddii aad rajaynayso inaad kasbato lacago dheeri ah ama kaliya blogging shaqo oo waqti-buuxa ah; Maqaalkani waxa uu ururiyaa liis siyaabo badan oo aad lacag uga samayn karto blog.
Haddii aad hore u lahayd blog, akhri qoraalkan si aad u ogaato siyaabaha aad lacag uga samayn karto blogging.
Sida Loo Noqdo Wakiilka Socdaalka ee Guriga 2022| Talaabooyinka Fudud
Sida lacag loogu sameeyo diyaarad Drone ah
Lacag ka samee kaydka
Miyuu Fundrise sharci yahay - Dib -u -eegista Fundrise
Dib -u -eegista Visualizer Portfolio - Fadeexad ama Sharci
Shabakadaha Ugu Fiican Meesha Ragga Lacag Ku Siiyaan
Raadinta meel aad kaga soo bixi karto xoogaa lacag ah markaad wakhti wacan la qaadanayso ragga,...
Hal dakhli oo kaliya ayaa ah waxa uu yahay; mushahar! Nasiib darrose, marmarka qaarkood kuma filna oo…
Madal Ganacsi Waraaqaha Ugu Fiican 2021 | Simulators ugu Fiican
In kasta oo ganacsiga saamiyadu uu noqon karo ganacsi is bedbeddela, ka ganacsiga warqaduhu wuxuu bixiyaa fursado iyo ganacsatada saamiyada cusub…
17 Siyaabood oo Aan La Qaban Karin Oo Lacag Laga Helo Baraha Bulshada 2022 -ka
Hadda ma ahan war in dadku lacag ka sameeyaan baraha bulshada. In kasta oo fikraddu ay tahay mid cusub, haddana…
Tan iyo markii uu soo shaac baxay internet-ka, shukaansiga online-ka waxa uu noqday mid caan ka ah dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku nool…